Tag: Daacish | Sagal Radio Services
Daacish oo nolosha ku gubtay labo ka mid ah Askarta Turkiga (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • December 24, 2016
Kooxda Daacish ayaa nolosha ku gubtay labo ka mid ah Askarta Turkiga nolosha ku gubtay, kaddib markii ay soo bandhigtay muuqaal argagax leh.
Daacish oo soo bandhigtay shan carruur ah oo tooganaya maxaabiis (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • August 27, 2016
Daacish ayaa soo bandhigtay muuqaal cusub oo argagax gelin ah oo ay ka soo muuqanayaan shan carruur ah oo uu ku jiro wiil British ah, iyagoo madaxa ka tooganaya shan nin oo Kurdiyiin ah, kuwaasoo lagu qabtay dagaal.
IS oo soo bandhigay sawirada raggii weeraray kaniisad ku taal Faransiiska (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • July 28, 2016
Ururka Daacish ayaa soo bandhigay labo dhalinyaro ah oo ka dambeysay weerar lagu qaaday kaniisad ku taal magaalada Saint-Etienne-du-Rouvray ee dalka Faransiiska halkaa oo ay ku gowraceen baadari Masiixi ah oo 85 sano jir ahaa.
Daacish oo xaqiijisay geerida Wasiirkeedii dagaalka Omar Shishani
Sagal Radio Services • News Report • July 14, 2016
Kooxda Daacish ayaa xaqiijisay geeridii Omar Shishani oo xil sare ka hayay kooxdaas, kaasoo la dilay dhowr bilood ka hor.
Daacish oo sheegay in xero ciidan ka furteen Soomaaliya (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • April 27, 2016
Kooxda la magac baxday dowladda Islaamiga ee fadhigoodu yahay dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa muuqaalkii u horeeyay soo bandhigay, kaasoo ay ku sheegeen inay xero ciidan ka furteen Soomaaliya, kaasoo ay ku tababarayaan dagaalyahanada ku soo biira.
Kenya oo sheegtay inay ka war heshay weeraro ay Daacish qorsheyneyso inay geysato
Sagal Radio Services • News Report • December 29, 2015
Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay ka war heshay weeraro ay qorsheyneyso Daacish in gudaha dalkeeda ka geysato, kadib markii boqolaal dagaalyahno ka tirsanaa Al-Shabaab ku biireen Daacish.
Daacish oo ku hanjabtay inay weerareyso Washington iyo dalalka kale ee reer Yurub
Sagal Radio Services • News Report • November 17, 2015
Kooxda Daacish ayaa ku hanjabtay inay weeraro ku qaadi doonto wadamada ka qeyb qaadanaya duqeymaha Suuriya, waxaana ay cadeeyeen in weerarkii Paris midka ku xiga uu yahay Caasimada Mareykanka ee Washington DC.
Kooxda Daacish oo mar kale ugu baaqday Al-Shabaab inay ku soo biiraan.
Kooxda la magac baxday Khilaafada Islaamka ee Daacish ayaa mar kale ugu baaqday Xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya inay ku soo biiraan, ayna adeecaan Hogaamiyaha Daacish Abuubakar Al-Baqdaadi.
Daacish oo bur burisay goobihii Taariikhiga ahaa ee magaalada Palmyra
Sagal Radio Services • News Report • August 24, 2015
Xoogaga Daacish ayaa bur buriyay goobihii taariikhiga ahaa ee ku yaallay magaalada Palmyra ama Tadmur, halkaasoobishii May ay la wareegeen.
Xubno Soomaali ka tirsan Daacish oo ugu baaqay Al-Shabaab inay ku soo biiraan (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • May 22, 2015
Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada oo ay ka soo muuqdeen Dagaalyahano Soomaali u dagaalama Dowladda Islaamiga ama Daacish ayaa waxay ugu baaqeen Al-Shabaab inay ku soo biiraan oo ay la midoobaan.
Daacish oo qabsatay magaalada Taariikhiga ah ee Tadmur
Sagal Radio Services • News Report • May 21, 2015
Dagaalyahanada Kooxda Daacish ayaa la wareegay gacan ku heynta magaalada taariikhiga ah ee dalka Suuriya ku taal ee Tadmur, halkaasoo maalmihii u dambeeyay dagaalo xoogan ay ka socdeen.
Daacish oo si buuxda gacanta ugu dhigtay magaalada Ramadi
Sagal Radio Services • News Report • May 18, 2015
Xoogaga dowladda Islaamiga ama Daacish ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada istiraatiijiga ah ee Ramadi oo ka tirsan gobolka ugu weyn Ciraaq ee Anbar.